September 20, 2019 - Myitter
September 20, 2019 Myitter 0
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူငယ် Rock Band တွေထဲမှာ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေတတ်တဲ့ Eternal Goshအဖွဲ့ကိုတော့ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ Eternal Gosh အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုရှင် ဟန်နေတာကလည်း ချောမောပြပြစ်ပြီး ယောကျာ်းဆန်တဲ့ စတိုင်လ်ကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ […]
၁၈နှစ်ပြည့်ရင် လက်ထပ်ယူမယ်ကတိပေးပြီး ၁၄နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကို ၂၈၅ကြိမ်အထိ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ ကျူရှင်ဆရာ မကြာသေးမှီက ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းမှာ ကျူရှင်ဆရာတစ်ဦးက အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးကို စုစုပေါင်း အကြိမ်အရေအတွက် ၂၈၅ကြိမ်အထိ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ETToday ရဲ့ အဆိုအရ Lan လို့ အမည်ရတဲ့ကောင်မလေးဟာ ၁၁နှစ်အရွယ်ကတည်းက အဆိုပါကျူရှင်ဆရာဆီမှာ ကျူရှင်တက်ခဲ့တာပါ။ […]
ခရီးသွားမိဘပြည်သူတွေ အတွက် တကယ့်ကို ၀မ်းသာစ၇ာသတင်းကောင်းလေးပါဗျာ…
လုံးဝ အမေးဇင်းပါ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားကွင်းသွားဖို့ Taxi ခ ၈၀၀၀ ကုန်စရာမလိုတော့ဘူး တံခါး ၃ ပေါက်ပါ SCANIA ကားများဖြင့် မြို့ပတ်ဘတ်စ်ကားလိုင်း ယခုလ ၂၃ ရက်တွင် စတင် ပြေးဆွဲမည်။ တံခါးပေါက် ၃ ပေါက်ပါရှိသည့် SCANIA ကားသစ်များဖြင့် YBS ရန်ကုန်မြို့ပတ် […]
မြဝတီမြို့မှ တရုပ်စာလုံးဖြင့်ဖော်ပြသော ဆိုင်များ ကြော်ငြာသော ဆိုင်းပုဒ်များ လိုက်လံဖြုတ်သိမ်း
မြဝတီမြို့တွင် တရုတ်စာဖြင့် ရေးသားထားသော ဆိုင်းဘုတ်များကို လိုက်လံဖြုတ်သိမ်း ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြဝတီမြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်ညပိုင်းက မြန်မာစာလုံးဝမပါသော တရုတ်စာသီးသန့်ရေးထားသည့်ဆိုင်းဘုတ် ၃ ခုကို မြဝတီမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့က လိုက်လံဖြုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ယင်းနေ့ညပိုင်းက မြဝတီမြို့အမှတ် ၄ ရပ်ကွက် သုမာလာလမ်းထောင့်နေရာတွင် တပ်ဆင်ထားသော တရုတ်စာတန်း အလျား(၃)ပေ၊ အနံ […]
ထုံးစံအတိုင်း FB ကနေ အသက်၂၂နှစ် အချောစား မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချိတ်မိပါတယ်….
အသက်၄၅ လောက် ကလေး၃ယောက်အဖေဟာ ရွယ်တူ သူ့မ်ိန်းမကို အသက်ကြီးပြီ ငြီးငွေ့ ပြီဆိုပြီး ကောင်မလေးငယ်ငယ် ရှာပါတယ်…. ထုံးစံအတိုင်း FB ကနေ အသက်၂၂နှစ် အချောစား မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချိတ်မိပါတယ်…. အပျော်ရှာချင်ပေမဲ့ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ကလေးတွေ အမေ ကိုလည်း မကွဲချင်တဲ့ ဒီလူအတွက် ပိုအဆင်ပြေစေတာက […]
မင်္ဂလာပွဲမှာ ဟင်းကိစ္စစကားများရာမှ နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးသားချင်းများ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား(ဗီဒီယို)
အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ Telangana ပြည်နယ်က မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာ သတို့သမားသတို့သမီးရဲ့ ဆွေမျိုးတွေ အချင်းချင်းခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိသူ (၈)ဦးအထိ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ရန်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ သတို့သားဘက်က ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက အရင်ဆုံး ပြဿနာ စပြီးရှာကြတာပါ။ ကနဦးက သိုးသားဒန်ပေါက် ကျွေးမယ်လို့ သတင်းပြေးခဲ့သော်လည်း တကယ်တမ်း […]
မိမိယုံကြည်ရာတစ်ခုတည်းဖြင့် ဘ၀ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းလျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ Sinon ရဲ့ဘ၀အကြောင်း ယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီး ဗလတောင့်တောင့်နဲ့ နည်းနည်းနှောနှော ဒေါက်အမြင့်ကြီးတွေကိုစီး catwalk ကိုကျွမ်းကျင်စွာလျှောက်ပြနေတဲ့ Sinon ဟာ ဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ ဘာလို့ဒီလိုအောင်မြင်လာတာလည်း ဆိုတာကို ဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် အနည်းငယ်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ သူကပရဟိတစိတ်လည်းအလွန်ထက်သန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်လာရောက်တဲ့အချိန်တွင် လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကို အားလုံးပဲမြင်တွေ့ပြီးဖြစ်မှာပါ။ Sinon ဟာ […]
ဒီလမ်းကို ဒီလိုသွားခဲ့ကြတာ ဒီလမ်းလေးက တစ်နှစ်မှာ တစ်ရက် ၊ တစ်ရက်မှာ တစ်ကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်မှာ လေးနာရီလောက်သာ ပေါ်သောလမ်း ။ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ – ဒီလမ်းဟာ နတ်တွေခင်းတဲ့လမ်း ဟုလည်း သိခဲ့ရ ၊ ကမ္ဘာမှာ ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာသာရှိသော လမ်း […]
သိထားရမယ့် အစိမ်းလိုက်မစားသင့်တဲ့ စားသောက်စရာ ၉ မျိုး
ဒီိဆောင်းပါးလေးကတော့ လူတိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်ပေမယ့် မီးဖိုချောင်ထဲဝင်တာ အိမ်ရှင်မတွေပိုများတာမလို့ သူတို့လေးတွေက ပိုသိထားသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ တချို့ဆို အစိမ်းလိုက်စားရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုကောင်းတယ်တို့၊ ပိုလတ်ဆတ်တယ်၊ ပိုအားရှိတယ်လို့ ယူဆပေမယ့် အစိမ်းစားသောက်တိုင်း မကောင်းဘူးဆိုတာအရင်ဆုံး သတိပေးချင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အစားအသောက်တွေထဲ ပါဝင်နေတတ်ပြီး အစိမ်းစားဖို့ အသင့်လျော်တဲ့ အစားအသောက်လေးတွေအကြာင်းကို Bright Side မှ […]